कुकुरबारे १० वैज्ञानिक र रोचक जानकारी
कुुकुर मानिसको घनिष्ट र वफादार मित्र हो । कुकुर अत्यन्त चलाख र मानव रक्षकका रुपमा पनि चिनिन्छ । सामन्यतः मानिसले कुुकुर बारे राख्ने जानकारी यही हो । तर, यहाँ कुकुरबारे १० नयाँ तथ्यहरू प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्राणशास्त्री तथा मानवशास्त्री जोन ब्राड शा मान्छे र जनावर बीचको सम्पर्क र आपसी व्यवहारको अध्ययन गर्छन् । ‘ईन डिफेन्स अफ डग’ र ‘एनिमल्स एमोङ्ग अस’ किताबका लेखक शाले कुकुरको आजसम्मको इतिहासको गहिरो अध्ययन गरेका छन् । उनकै अध्ययनमा आधारित तथ्य अमरवाणी संवाददाता अभिषेक जोशीले विविसी हिन्दी अनलाइनबाट अनुवाद गरेका छन् ।
व्वाँसोको टाढाको वंशज
ब्वाँसाको त्यो प्रजाति अहिले लोप भईसकेको छ, कुकुर त्यसको टाढाको वंशज हो । अमेरिका र युरोपमा आजभोलि पाईने ब्वाँसाहरू कुकुरको टाढाको नातेदार हुन् । यी ब्वाँसा र कुकुरको डिएनए ९९% मेल मिल्छ ।
प्रजाति अलग भएर पनि समानता
कुकुर धेरै प्रकारका छन् र यिनीहरूका थुप्रै प्रजाति पनि छन् । यतिका प्रजाति कुनै पनि जंगली वा घरेलु पशुका छैनन् । यसको लागि पनि मान्छे नै जिम्मेवार छ । तथापी, कुकुरको शारीरिक विविधताको एउटा सीमा छ । सबैभन्दा सानो आकारको चिवा देखि सबैभन्दा ठूलो ग्रेट डन प्रजातिको कुकुरको शारीरिक संरचना एउटै ढाँचाको छ, जस्तो यिनीहरूका पुर्खा ब्वाँसाको थियो । आकार र प्रजाति फरक भएपनि यिनीहरूबीच समानता छ ।
सुँघ्ने क्षमता तिखो किन छ ?
कुकुरको नाक तथा मुखको माथिल्लो हिस्सामा ज्याकब्सन वा वोमेरोनेजल नामको एउटा अंग हुन्छ, जसले गर्दा कुकुरको सुँघ्ने क्षमता तिखो हुन्छ । वैज्ञानिकहरुले अहिलेसम्म कुकुरमा यो अंग किन हुन्छ भन्ने पत्ता लगाउन सकेका छैनन् । तर, विरालो तथा अन्य जनावरमा गरिएको अध्ययनले यो क्षमता सम्भवतः अन्य कुकुरले छाडेको संकेत पहिचान गर्न हो भन्ने देखाएको छ ।
कुकुरको दृष्टि कस्तो हुन्छ ?
के कहिले सोच्नु भएको छ, कुकुरको दृष्टि कस्तो हुन्छ ? कुकुरले हरियो, पहेँलो र निलो रंगमा हामीले झैँ फरक छुट्याउन सक्छ तर कुकुरको आँखाले रातो रंग पहिल्याउन सक्दैन । उसले रातो रंगलाई गहिरो स्लेटी देख्छ ।
कुकुर मुस्कुराउँछन् तर ती कारणले गर्दा होईन, जुन कारणले गर्दा मान्छे मुस्कुराउँछन् । प्राणशास्त्री जोन ब्राड शा भन्छन्, कुकुर आप्mनो मालिकबाट माया पाउन मुस्कुराउने गर्दछ । यसको मतलब यो हाईन कि ऊ खुसी भएर मुस्कुराएको हो । यो उसको बेचैनीको संकेत हुन सक्छ तथा तपाईँबाट उसले अलिकति हौसला र हिम्मत चाहेको हो । तसर्थ, तपाईँको कुकुर मुस्कुराई रहेको देख्नुभयो भने उसलाई स्पर्श गर्न नभुल्नुस् ।
गल्तीमा पछुतो हुँदैन
कुकुरलाई आपूmले गलत गरेको महसुस हुँदैन । तर, मानिसलाई त्यस्तो महसुस हुन्छ, जब उनीहरू लज्जाबोध गरेको जस्तो अनुहार बनाउने गर्दछन् । धेरै जसो मानिसहरु भन्ने गर्दछन् कि कसरी उनीहरूको कुकुर गिल्टी लुक दिने गर्दछ । तर, वैज्ञानिक भन्छन्, ‘त्यसबेला कुकुर सामने उपस्थित मान्छेको बडी ल्याङ्वेजको आधारमा यस्तो प्रतिक्रिया दिने गर्दछन् ।’ अपराध बोध एउटा पेचिलो भाव हो जसलाई कुकुरले बुभ्mन सक्दैन । यस्तो अवस्थामा गिल्टी लुक दिँदा कुकुरलाई सजाय पाउने डरले सताईरहेको हुन्छ । तर, उसलाई थाहा हुन्न उसले केही गल्ती गरेको छ ।
सहारा आवश्यक परेको हुन्छ
जब कुकुरको छाउरोलाई मानिसको मित्रताको स्वभाव महसुस हुन्छ, त्यसपछि उसलाई स्वभाविक ज्ञान हुन्छ, मान्छेसँग बस्दा उसले जीवित रहने सम्भावना बढी हुन्छ । यही कारण हो, कुकुर एक्लो पर्दा आँत्तिन्छ । कुकुरले टाढाको सोच्न सक्दैन र उसलाई लाग्छ, उसको मालिकले उसलाई सदाको लागि छाडिदिएको छ ।
यसकारण मित्रवत् हुन्छ कुकुर
नेशनल जियोग्राफी अनुसार, मान्छेसँग बस्ने भएको कारण कुकुरमा विलियम्स सिन्ड्रोम जस्तो एउटा सिन्ड्रोम पैदा हुन्छ । यदि मान्छेमा GTF2I र GTF2IRD1 नामको जिन्स नहुने हो भने विलियम्स सिन्ड्रोम हुन्छ । यो एउटा यस्तो अवस्था हो जहाँनेर मान्छेमा बुझाईको समस्या हुनथाल्छ । र, उनीहरूलाई सबैसँग प्रेम भाव राख्ने बानी पर्छ । यदि कुकुरमा हे¥यौँ भने उनीहरूका GTF2I र GTF2IRD1 नामका जिन्स फरक हुन्छन् । यसकारण उनीहरु मान्छेको सम्पर्कमा आएर ज्यादा मित्रवत हुन्छन् ।
मान्छेको लागि भावना राख्दछन्
धेरै जसो स्तनधारी जनावरले प्रेम, डर, बेचैनाी र खुसी जस्ता आधारभूत भावहरू महसुस गर्दछन् । तर, कुकुरले मान्छेका लागि अन्य फरक–फरक तरिकाको भावनात्मक प्रतिक्रिया दिन्छ भन्ने पत्ता लागेको छ । धेरै जसो मानिसहरू ठान्छन्, उनीहरूको कुकुर उनीहरूलाई माया गर्दछ । कुकुरले कसलाई कति प्रेम गर्दछ भन्ने कुरो उसको व्यवहारमा निर्धारित रहेको हुन्छ, वैज्ञानिकहरू भन्दछन् ।
एमारी विश्वविद्यालयका प्रोफेसर ग्रेगरी बन्र्सले कुकुरलाई एमआरआई गर्दा स्थीर भएर उभिने तालिम दिए । उनी हेर्न चाहन्थे, मालिकको तस्बीर देखेपछि हुने खुसीमा उनीहरूको दिमाग कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिन्छ । यसबाट थाहा भयो, चिम्पाञ्जीको तुलनामा मान्छेको बडी ल्याङ्ग्वेज कुकुरले राम्रोसँग बुझेको हुन्छ ।
भित्री मनबाट जंगली
यदि कुनै कुकुर आप्mनो जीवनका सुरुवाती तीन महिना मान्छेको सम्पर्कमा आएन भने बाँकी जीवन जंगली रहन सक्छ । यसको उदाहरण अस्ट्रेलियन डिङ्गो नामका कुकुर छन्, जो करिब ४ हजार साल अघिसम्म घरपालुवा थिए । तर, यस द्विपमा एक्लो छाडिएका यी कुकुर अब जंगली बनिसकेका छन ।
प्रकाशित ११ आश्विन २0७५ , बिहिबार | 2018-09-27 12:51:45